I-China Chlorine Dioxide Air Sanitizer yokuvelisa kunye neFektri | FIZA
Esona sithako siphambili kunye nesixa somxholo: I-ClO2 (6g)
Ifomu yesisindo: Ijeli
Umhla WOKUPHELELWA: Iinyanga 1-2 emva kokuvulwa.
I-chlorine dioxide yomoya isicoci sanitizer esisebenzayo kunye nokuhlaziya umoya. Iyakhawuleza i-oxidize ii-microorganisms xa idibana nayo, kwaye ngaloo ndlela ibulale ibhaktheriya okanye inqanda ukukhula kwazo.
Uvavanyo olusungulwe ngumbutho wobugcisa lubonisa ukuba inqanaba lokubulala iintsholongwane kwijeli yokuhlanjululwa komoya liphezulu njenge-99.9%.
Ukukhawuleza nokuhlala ixesha elide:
Imveliso iyakwazi ukumilisela isiphumo sokubulala iintsholongwane ngokukhawuleza kwaye inokusetyenziselwa ixesha elide.
Ikhuselekile kwaye isasazekile
Imveliso ayiyiyo i-carcinogenic, teratogenic, okanye mutagenic kumntu. Ukhuseleko lwayo lubekwa kwi-A1 nguMbutho wezeMpilo weHlabathi.
Inani lomxholo: 158g (i-150g yejeli, i-8g activator eneengxowa)
Phantsi kwemeko efanayo, ibhotile ye-150g yokuhlanjululwa komoya inokucoca indawo malunga ne-15-25 m2. Ingasetyenziselwa indawo yokusebenza, iwadi, ikhaya, igumbi lokufundela, ngaphakathi emotweni ... njl.nokusetyenziselwa ukubulala iintsholongwane kwiimaski.
1. Vula isiciko sebhotile
2.Galela wonke umntu osebenze ngengxowa ebhotileni
3. Guqula ikepusi iye kule inemingxunya yomoya kuyo, ime imizuzu eli-15.
4. Qinisekisa ukuba umxholo uqinisiwe ube yi-colloid, wakuba uqinisiwe, uwubeke phezulu egumbini. Ukuhlengahlengisa inqanaba lokukhupha umxholo osebenzayo, hlengisa ubungakanani bemingxunya yomoya kwikepusi
Nceda ungajiki kwibhotile okanye uyibeke phezulu ezantsi xa sele ivuliwe.
Nceda ungayibeki ngaphandle kokungena komoya wefestile. Nceda uphephe ukukhanya kwelanga.
Nceda ungangxameli ngqo ekuvulekeni kwebhotile.
Nceda uphephe ukudibana nempahla okanye ilaphu.
Ukuba uginywe ngengozi, nceda ngoko nangoko ubonane nogqirha.
Indawo yokugcina kufanele ukuba yomile, ipholile kwaye ingene umoya, kude nobushushu kunye nomlilo.
Egqithileyo Chlorine dioxide Gel Powder
Okulandelayo: Isisixhobo somoya
Chlorine dioksayidi Card
Chlorine dioksayidi Generator
I-Chlorine Dioxide Ulwelo
Chlorine dioksayidi Powder
Isisombululo seChlorine dioksayidi